ခရီးဆောင် 20W အမြန်အားသွင်း Baseus External Power Bank ကို ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ WoopShop®
ခရီးဆောင် 20W Fast Charging Baseus External Power Bank
$53.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $80.99
မှစ. သင်္ဘောများ ပိုလန် စပိန် တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်သစ် ရုရှားပြည်ထောင်စု
အရောင် PD 20W အနက်ရောင် PD 20W အဖြူရောင် 15W အနက်ရောင် 15W အဖြူရောင်
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် 20000mAh 10000mAh
ပိုလန် / PD 20W Black / 20000mAh ပိုလန် / PD 20W Black / 10000mAh ပိုလန် / PD 20W White / 20000mAh ပိုလန် / PD 20W White / 10000mAh SPAIN / 15W Black / 20000mAh SPAIN / 15W Black / 10000mAh SPAIN / 15W White / 20000mAh SPAIN / 15W White / 10000mAh တရုတ် / PD 20W Black / 20000mAh တရုတ် / PD 20W Black / 10000mAh တရုတ် / PD 20W White / 20000mAh တရုတ် / PD 20W White / 10000mAh ပိုလန် / 15W Black / 20000mAh ပိုလန် / 15W Black / 10000mAh ပိုလန် / 15W White / 20000mAh ပိုလန် / 15W White / 10000mAh တရုတ် / 15W Black / 20000mAh တရုတ် / 15W Black / 10000mAh တရုတ် / 15W White / 20000mAh တရုတ် / 15W White / 10000mAh ပြင်သစ် / PD 20W Black / 20000mAh ပြင်သစ် / PD 20W Black / 10000mAh ပြင်သစ် / PD 20W White / 20000mAh ပြင်သစ် / PD 20W White / 10000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / PD 20W Black / 20000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / PD 20W Black / 10000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / PD 20W White / 20000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / PD 20W White / 10000mAh ပြင်သစ် / 15W Black / 20000mAh ပြင်သစ် / 15W Black / 10000mAh ပြင်သစ် / 15W White / 20000mAh ပြင်သစ် / 15W White / 10000mAh SPAIN / PD 20W အနက်ရောင် / 20000mAh SPAIN / PD 20W အနက်ရောင် / 10000mAh SPAIN / PD 20W White / 20000mAh SPAIN / PD 20W White / 10000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 15W Black / 20000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 15W Black / 10000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 15W White / 20000mAh ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 15W White / 10000mAh
ခရီးဆောင် 20W အမြန်အားသွင်း Baseus External Power Bank - ပိုလန် / PD 20W အနက်ရောင် / 20000mAh backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် - အခြေခံ
အင်္ဂါရပ်များ: built-in ကေဘယ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် display၊ LED မီးခွက်နှင့်
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE, RoHS, FCC
ထည့်သွင်းမှု interface: USB Type C, Micro USB
Shell ပစ္စည်း - ပလပ်စတစ်
လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သောနည်းပညာ - Two-way Quick Charge
အများဆုံး Output: PD 20W
အရောင်: အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်
မိုက်ခရို Input: 5V/2A, 9V/2A
အမျိုးအစား C ထည့်သွင်းမှု- 5V/3A၊ 9V/2A
Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
USB1/USB2 Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
စုစုပေါင်း Output: 5V/3A Max
စွမ်းဆောင်ရည်: 30000mAh/ 3.7V (111Wh), 20000mAh/ 3.7V (74Wh), 10000mAh/ 3.7V (37Wh)
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းဆောင်ရည်: 30000mAh = 18000mAh, 20000mAh = 12000mAh, 10000mAh = 5800mAh
အင်္ဂါရပ်များ: ခရီးဆောင်အားသွင်းခြင်း၊ 30000mAh Power Bank၊ USB Power Bank၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအတွက်သယ်ဆောင်နိုင်သော charger၊ mini power bank၊ power bank 10000mAh power bank 10000mAh Charger, ဖုန်းအတွက် LED power bank, power bank 30000 mAh, ခရီးဆောင်ပြင်ပ၊ Digital display PD power bank ၁၀၀၀၀/၂၀၀၀၀/၃၀၀၀၀ mAh Samsung Samsung Huawei အတွက် power bank, power bank, power bank, dual USB power, fast charger power bank quick charger, fast charging power bank, 10000mAh 20000mAh Power bank 30000W PD Powerbank power bank
လိုက်ဖက်တဲ့ဆဲလ်ဖုန်း: iPhone 12 11 pro-Xs Max, iPhone 12pro X 876 6s Plus55s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Huawei p40 p30 pro, Samsung S20 S10 Plus Note 10 9, for OnePlus 87Pro, POCO M3 X3 F3 Pro NFC, Reamle 7, UMIDIGI A9 A7 အတွက်
Baseus 10000mAh Power Bank PD 20W အိတ်ဆောင်အားသွင်းကိရိယာ
စွမ်းဆောင်ရည်: 10000mAh/3.7V 37Wh
Rated စွမ်းရည်: 5800mAh
စွမ်းအင်ပြောင်းလဲနှုန်း: ၇၅% ကျော်
Micro Input- 5V/2A၊ 9V/2A Max
အမျိုးအစား C ထည့်သွင်းမှု- 5V/3A၊ 9V/2A Max
USB 1 & USB2Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Max
အမျိုးအစား C အထွက်- 5V/3A၊ 9V/2A၊ 12V/1.5A Max
Size: 153mm x ကို 68.8mm x ကို 16.9mm
LED Display 20mAh ပါ ၀ င်သော Baseus PD 20000W Power Bank
စွမ်းဆောင်ရည်: 20000mAh/3.7V 74Wh
Rated စွမ်းရည်: 12000mAh
Size: 153mm x ကို 68.8mm x ကို 29.5mm
92 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ငါဒီထုတ်ကုန်ကိုအများကြီးထောက်ခံတယ်၊ အဲဒါက ၃ ရက်လောက်မြန်ပြီးနယ်သာလန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အားအမြန်သွင်းခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤပါဝါဘဏ်အားကြီးသောသိုလှောင်မှုကိုအပြည့်အဝအားသွင်းရန်ကြာမြင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်
၃၄ ရက်အတွင်းဘီလာရုစ်သို့ရောက်လာသည်။ အရည်အသွေးအလွန်ကျေနပ်သည်။ စတိုးဆိုင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး ရှိ၍ သူလာကြောင်းအသိပေးသည်။ ခြေရာခံလိုက်ပါပြီ။ ငါလူတိုင်းကိုအကြံပြုသည်
၀၆.၀၉.၂၁ တွင်အမြန်ပို့ဆောင်ရန်မှာကြားပြီးကျွန်ုပ်သည် ၀၈.၀၉.၂၁ သို့ရောက်နေပြီ
သုံးရက်အတွင်းမော်စကိုရှိ Pyaterochka သို့ပို့ဆောင်သည်။ အရာအားလုံးကအိုကေသလိုပါပဲ။
ပစ္စည်းတွေကျေနပ်တယ်။ အမြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြံပြုပါ။